ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ MNP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်စိန်မြမောင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ MNP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်စိန်မြမောင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ January 8, 2017 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 632 Views
ဖြေ ။ ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေရော၊ ဆရာ့မိတ်ဆွေတွေရော သူတို့မြို့ နယ် မှာ ဝင်ရောက်အရွေးခံမယ့် ကိုယ်စားလှယ်တွေမရှိဘူး၊ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဗဟိုကော်မတီကလည်း တာဝန် ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ အခုလိုဝင်ရောက်အရွေးခံဖြစ်တာပါ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုနေရာ မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် စေတနာ သဒ္ဓါတရားအပြည့်နဲ့ ကူညီမယ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အရွေးခံရရင်လည်း မွန်အမျိုးသား ပါတီ တစ်ခု တည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက်ပဲ ဖြစ်တယ်၊ တကယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ မအောင်ရင် လည်း မွန်ဒေသခံ ပြည်သူပြည်သားတွေ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက် ပေးမယ်။
MNP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်စိန်မြမောင်(MNA)
မေး ။ ။ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာ အဓိက စိန်ခေါ်မှုက ဘာလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘီလူးကျွန်းပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ကျနော့အတွက် ဘာအခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုမှ မရှိပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က ပညာတတ် တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း တာဝန်ကြီးကြီးတွေ ယူထားတယ်ဆိုတော့ နဂိုကတည်းက ကျနော့စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားတဲ့သူတွေ မြို့နယ်တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်၊ ဒေသခံတွေ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်၊ မွန်အမျိုးသားပါတီမှာ မွန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထင်ထင်ရှားရှားလုပ်လာတာ ၁၉၉၀ ကနေပြီးတော့ ဒီကနေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်ပါတီ၊ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသားကိုမှ မပုတ်ခတ်ဘူး၊ ဒေသခံတွေလိုအပ်တဲ့အကူအညီကို တတ်ထားတဲ့ ဥပဒေပညာနဲ့ နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ တွေကို ကူညီသွားမယ်၊ နိုင်တာရှုံးတာကတော့ ခေါင်းထဲမှာ မထည့်ထားဘူး၊ အခုကျနော် ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာကလည်း နိုင်ငံရေး ရာထူးရဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတွေရဲ့ အလုပ်သမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် နေဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ မွန်အမျိုးသားပါတီက တာဝန်ပေးလို့ ကျနော်အရွေးခံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်၊ မြို့နယ်က ကော်မတီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေရော၊ ကျေးရွာဥက္ကဌတွေ၊ အတွင်းရေးမှူးတွေရော ကျနော်သွားတိုင်း ငွေကြေးဘာတစ်ခုမှ သူတို့ကို အကုန်အကျမခံစေရဘူး။သူတို့ကလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ပဲ ဆက်ဆံပြောဆိုတယ်။
မေး ။ ။ တကယ်လို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပါက မွန်လူမျိုးအတွက် ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားတာလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကျနော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ စီးပွားရေး၊ စိတ်ဓာတ်ကအစ ခေါင်းဆောင်စိတ်တွေ၊ မြို့သူမြို့သားကောင်းစိတ်တွေ အရင်ဆုံး ကျနော်ပြင်မယ်၊ ချောင်းဆုံမှာ ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ အလုပ်သမားကောင်းကောင်းရပြီး၊ အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း၊ လမ်း ပျက်တာကအစ စေတနာ သဒ္ဓါတရားအပြည့်နဲ့ ကျနော်လုပ်ပေးမယ်၊ ကျနော် အမတ်ဖြစ်သွားရင် မြို့ရွာဒေသအတွက်၊ မွန်ပြည်နယ်အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို လွှတ်တော်မှာ တင်ပြပေးမယ်။
မေး ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရခြင်းက မွန်လူမျိုး၊ မွန်ပြည်နယ်အတွက် ဘာတွေအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ ကျနော်အရွေးခံရရင် ဒေသခံတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ သူတို့ တင်ပြလာမယ့် အရာတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးမယ်၊ မြို့နယ်တစ်ခုသာမက မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ နောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုတာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စမှန်သမျှ ပြည်သူတွေ တင်ပြလာမယ်ဆိုရင် အားလုံးကို ကျနော်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။
ဖြေ ။ ။ အခုကျနော်တို့ကြိုးစားနေတဲ့ သုံးလအတွင်းမှာ လောလောဆယ် မတရားခံနေရတဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်တာ မတော်မတရားဆုံးရှုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့ကိို အကူအညီတောင်းလို့ ရပါတယ်၊ ကျနော်အရွေးခံရလျှင် ဒေသခံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမယ်။
ဖြေ ။ ။ ကနော် အရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုရင် ဒေသခံတွေရဲ့ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လိုအပ်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ်၊ ပညာရေးအပိုင်းမှာဆိုရင် ကျောင်းမထားနိုင်တဲ့ မိသားစုတွေ ပညာတတ်ဖြစ်အောင်၊ ဘက်စုံကနေ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဖြေရှင်းပေးမယ်၊ ဒါကတော့ အမတ်မဖြစ်လည်း တစ်သက်လုံး လုပ်ပေးမယ်၊ အမတ်ဖြစ်ရင် အဲဒီထက် ပိုလုပ်နိုင်မယ်။
မေး ။ ။ မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ထဲကနေ ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ ရှိလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကျနော် ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်မှာပဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပေမယ့် အမှန်ကတော့ မွန်အမျိုးသားပါတီကို အခြေခံပြီးတော့ လုပ်ပေးတာပေါ့နော်၊ ပါတီလည်းနာမည်ရှိအောင်၊ မွန်လူမျိုးအတွက်နာမည်ရှိအောင် အကုန်လုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်တာဖြစ်တယ်၊ ကြိုက်တဲ့အကူအညီပဲတောင်းတောင်း၊ ကြိုက်တဲ့အခက်အခဲပဲ ပြောပြော ဘယ်တော့မှ အလွဲသုံးစား မဖြစ်စေရဘူး၊ အကုန်လုံးပြည့်စုံအောင် တာဝန်ခံပေးမယ်ပေါ့နော်။
မေး ။ ။ မွန်လူမျိုးအတွက်ကော ဘာတွေလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စဉ်းစားထားပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ မွန်လူမျိုးအတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင် မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေအားလုံး မြင့်သထက်မြင့်အောင် ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် လုပ်သွားဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ ဒီနေ့ဒီရက် ဒီအချိန်ကစပြီး ဒေသခံတွေရဲ့ လူမှုရေး ကိစ္စအဝဝသော်လည်းကောင်း၊ ပညာရေး ကိစ္စသော်လည်းကောင်း၊ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမဆို ဒီနေ့ကစ ကျနော်ကွယ်လွန်တဲ့အထိ အလုပ်သမားကောင်း ဖြစ်စေရမယ်၊ နောက်ပြီးတော့ သူများပါတီကို မဝေဖန်နဲ့၊ တစ်ခြားပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပုတ်ခတ်ပြီး မပြောနဲ့၊ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့သူ ဖြစ်သွားမယ်၊ ဒါကြောင့် ကိုယ်စေတနာရှိတယ်၊ သဒ္ဓါတရားရှိမယ်ဆိုရင် ပြည်သူအရှေ့မှာ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ပေးရမယ်လို့ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို မှာကြားလိုပါတယ်။
အမည်- နိုင်စိန်မြမောင် (ခ) နိုင်မြမောင်
အလုပ်အကိုင်- (အငြိမ်းစား) ကျောင်းဆရာ
ပညာအရည်အချင်း- LL.B ၊ JATC
မွေးသက္ကရာဇ် – ဆန်း ၁၁.၁၂.၁၃၁၃
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးနံပါတ် – ၁၀/ သဖရ (နိုင်) ဝ၀၅၁၉၀
အဖအမည် – နိုင်စံတင် (ကွယ်လွန်)
အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ – မ (၇) ၊ အောင်ဆန်းလမ်း၊ ကြံ့ခိ်ုင်ရေးရပ်ကွက်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့
ပါတီတာဝန် – MNP ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ ဥပဒေရေးရာဌာနမှူး
လူမှုရေး/ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားခဲ့မှုများ (အကျဉ်း)- ၁၉၆၉ မှ ၁၉၈၆ အထိ သံဖြူဇရပ်မြို့၊ အလပြ (အထက-၁)၊ ၁၉၈၆ မှ ၂၀ဝ၁ ထိ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ၊ ၄င်းနောက်ပိုင်း ဥပဒေအကြံပေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည်။
နဝတ၊ မဆလ၊ အစိုးရလက်ထက် ရပ်ကွက်ကောင်စီအတွင်းရေးမှူး၊ ၁၉၈၉ မှ ယနေ့ထိ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၊ ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၃ ထိ မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ၂၀၁၃ မှ ယနေ့ထိ မွန်အမျိုးသားပါတီတွင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ ဥပဒေရေးရာဌာနမှူး တာဝန်ယူခဲ့သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားရေး နှင့် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းအပေါ် ၄င်းအချိန် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အထင်အမြင်လွဲမှား၍ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး တရားမဝင်ချဲထီလောင်းကစားပုဒ်မ ၁၅ (က) အရ စစ်ခုံရုံး (၇/ ၉၁) ရတခမှ ပြစ်ဒဏ် (၃) နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ဖူးသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ(၁) တွင် မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ကိုယ်စားပြု၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရေးမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် မွန်အမျိုးသားပါတီကိုယ်စားပြု၍ ဝင်ရောက် အရွေးခံခဲ့ဘူးသည်။
Previous မော်လမြိုင်မြို့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် တရားသောစစ်ပွဲများထောက်ခံကြိုဆိုပွဲကျင်းပမည်
Next လွှတ်တော်ခွင့်မပြုသည့် VIP ဧည့်ရိပ်သာ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဆောက်လုပ်နေဆဲ